Home News ganacsi Soomaali ah oo lagu dilay Dalka Koonfur Afrika
ganacsi Soomaali ah oo lagu dilay Dalka Koonfur Afrika
Koox Burcad Koonfur Afrikaan ah, ayaa waxa ay dalkaasi ku dileen muwaadin Somaliyed, kadib markii ay rasaas ku fureen, isaga oo ku sugan goobtiisa ganacsiga.
Allaha u naxariistee Marxuumka la dilay, ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Hillaal Xirsi Jaamac, wuxuuna dilkiisa ka dhacay Magaalada Cape Town, gaar ahaan xaafadii uu ka daganaa Magaaladaasi ee Hanover Park.
Burcadda Koonfur Afrikaanka ah ee falkaasi dilka ah gaysatay ayaa ka baxsatay goobtii ay ku dileen muwaadinka Somaliyed, iyadoo tani qayb ay ka tahay tacadiyada dadka Somaliyed ay kala kulmayaan dalka South Afrika.
Booliska dalkaasi ma jirto tallaabooyin muuqda oo ay qaadaan, marka laga reebo inay sheegaan kaliya baaris inay sameynayaan, balse waxaa sii kordhaya beegsiga gaarka ah ee lagu haayo ganacsatada Somaliyed ee dalkaasi ka dhex shaqeysata.
Muwaadiniinta Somaliyed ee dalka Koonfur Afrika ku ganacsata, ayaa si wayn uga argagaxay falka dilka ah ee muwaadinkaan loo gaystay, maadaama dhankooda cabsi ay soo food saartay.
Dilalka muwaadiniinta Somalida ayaa intooda badan ka dhici jiray tuulooyinka u dhaw Magaalada Cape Town oo Booliska aysan joogin badanaa, balse dilkaan, ayaa wuxuu ka dhacay Magaalada Cape Town.
Previous articleSoomaalida Minnasota oo dacwad ka gudbiyay Shirkada Amazon
Next articleDowladda Pakistan oo balan qaaday iney taageeri doonto Soomaaliya
Muwaadiniin Somalia Ah Oo Dil Iyo Dhaawac Loogu Geystay Koonfur Africa
Wafdi Ka Socda Dowladda Eritrea oo Soogaray Magaalada Muqdisho